ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း _ ခွန်မြလှိုင်: ကလေးတွေ ကျင်လည်မယ့် လူ့အဖွဲ့အစည်း
ကလေးတွေ ကျင်လည်မယ့် လူ့အဖွဲ့အစည်း
မေမေ... အိုပါးဂဏန်းစတိုင် ကြည့်ချင်တယ်။ ဘေဘီလေးလဲ ကြည့်ချင်တယ် ဟိုမှာကြည့် သူ ခုန်နေပြီ။ အေးအေး မေမေ ဖွင့်ပေးမယ်။ မေမေဖွင့်ရင် မြင်းနဲ့ကတာပဲ ဖွင့်နော် အန်တီကတာမဖွင့်နဲ့။ အန်တီကတဲ့ ဟာကို ဘေဘီလေးကို မပြနဲ့ ဘာလို့လဲ မီးမီးရဲ့ မကောင်းဘူး။ ဘေဘီလေးကို မပြနဲ့။ လေးနှစ်သမီးက သူကြည့်ချင်တဲ့ ခုန်ဆွခုန်ဆွ အကတွေနဲ့ MTVကို တနှစ်ခွဲသမီးဖြစ်သူ သူ့ညီမ မကြည့်သင့်ဘူးလို့ သူထင်တဲ့ version ကို မဖွင့်ဖို့ တားနေခြင်းပါ။ ဖအေ လုပ်သူကတော့ အားရပါးရ ရယ်ရင်း ငါ့သမီးက conservative တဲ့။ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ဘေဘီ.. ရှေ့မထွက်နဲ့... ဟိုမှာ အကောင်မြင်လား ကိုက်ကိုက်နော်.. ကိုက်လိုက်လိမ့်မယ်.. အဲဒါအကောင်မဟုတ်ပါဘူး ဘွားဘွားရဲ့။ အရုပ်ပါ။ မကိုက်ဘူး။ ကိုက်တယ် မီးမီးရဲ့။ အပြင်မထွက်နဲ့။ မကိုက်ဘူး အဲဒါအရုပ် ဒီမှာကြည့် ကိုင်လို့ရတယ်။ ဟာာာ.. မီးမီးကလဲ ဘေဘီလေးက မသိလို့ ကြောက်အောင် ခြောက်နေတာကို... မသိရင် သိအောင်ပြောပေါ့ ဘွားဘွားရဲ့.. မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဘာလို့ လိမ်ပြောလဲ။ မကြောက်တဲ့လူကို ကြောက်အောင် မခြောက်ရဘူး။ အဲဒါ မကောင်းဘူး။ မိုက်ဒီ... (မိုက်ဒီ= မကောင်းဘူး လို့ ထိုင်းစကားဖြင့်ပြောခြင်း) ကလေးမို့ မသိသေးလို့ အပြင်မထွက်အောင် ပြောတာပေါ့ မီးမီးရဲ့ မပြောနဲ့။ အဲလို မပြောနဲ့။ မပြောရဘူး။ မသိသေးတဲ့လူကို လိမ်ပြောတာ မကောင်းဘူး။ အောင်မလေးတော်.. ကလေးက ကလေးလိုမနေဘူး ဘွားအေကို တခွန်းမကျန် ပြန်ပက်နေတာ.. လူကြီးကို အဲလို ပြန်မပြောရဘူး အဲဒါ သိပ်မိုက်ရိုင်းတာ သိလား။ မပြောနဲ့ နောက်ထပ် မပြောနဲ့။ မကြားချင်ဘူး ဆူဆူညံညံ အသံတွေကြောင့် သက်ပြင်းအသာချရင်း ၀င်ထိန်းမယ့်အကြံကို လက်လျှော့ရင်း နောက်ဖေးကိုသာ ၀င်ခဲ့မိတော့ သည်။ ကလေးစိတ်ပညာ ပါမောက္ခတွေ ဖွင့်တဲ့ကျောင်းမှာမှ ကျောင်းထားမိတဲ့ လေးနှစ်သမီးနဲ့ မြန်မာပြည် ကနေ ရှေးဟောင်း ရင်ဘတ်ကြီး နဲ့ အလည်ရောက်လာတဲ့ အသက် ၆၀ကျော်ဘွားအေတို့ကြားက ပဋိပက္ခမှာ အတူတူ ထားမိတဲ့ ကိုယ်သာ မှားတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ကြက်ပျံ... ဟိဟိဟိ ငှက်ပျံ... ခစ်ခစ်ခစ် ၀က်ပျံ... ၀က်က မပျံဘူးလေ သြော် မပျံဘူးလား ဒါဆို လိုက်မပျံနဲ့လေ မီးမီးရဲ့... မပျံဘူးလေ.. ဒီမှာကြည့် မီးမီးလက်ချထားတယ်။ ဘွားဘွားလဲ မပျံတဲ့ အကောင်ကို ပျံတယ်လို့ မပြောနဲ့။ ဒါဆော့တာလေ မီးမီးရဲ့ .. ဆက်ကစားချင်တယ်မို့လား ကစားချင်တယ်။ ဟုတ်ပြီ ပြန်ကစားမယ်။ စာကလေးပျံ... ခိခိခိ ကျီးကန်းပျံ... ဟဲဟဲဟဲ သိမ်းငှက်ကြီးပျံ... ဟီးဟီးဟီး ဆင်ပျံ... ဆင်က မပျံဘူးလေ.. တော်ပြီ။ အဲလို မဟုတ်တာတွေ ပြောနေရင် ဆက်မကစားတော့ဘူး။ ဒီကစားနည်း မကောင်းဘူး .. မိုက်ဒီ ညည်း အရွယ်နဲ့ မလိုက်ဘူး။ တော်တော် ခေါင်းမာတယ် မမာဘူး။ မာတယ် မာတယ်။ မာလို့ အဲလို အငြင်းထူနေတာပေါ့။ ကစားတာပဲဟာ ကောင်းကောင်း မကစားဘူး။ ရှည်ကို ရှည်တယ်။ ကောင်းမှ မကောင်းတာ။ ဟုတ်မှ မဟုတ်ဘဲနဲ့။ မကစားဘူးပေါ့။ တော်ပြီ ဆက်မပြောနဲ့။ ဒါက နောက်တပွဲ... +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ဟိတ်တအား ဆူညံ အော်ဟစ်ပြီး ဆော့မနေနဲ့နော်။ အဲလိုဆိုးနေရင် ဦးဦးဆိုးဆိုးကြီးက အိတ်မည်းမည်းကြီးနဲ့ လာဖမ်းထည့် သွားလိမ့်မယ်။ ဘယ်က ဦးဦးဆိုးဆိုးလဲ ဒီနားမှာ လျှောက်သွားနေတဲ့ ဦးဦးဆိုးဆိုးပေါ့ ဦးဦးဆိုးဆိုးကို ရဲက မဖမ်းဘူးလား။ (လေးနှစ်သမီးရဲ့ အမေးကြောင့် ရယ်ချင်ပက်ကျိ ဖြစ်သွားပေမယ့် ဘွားအေ စိတ်ဆိုးမှာ စိုးလို့ ရယ်ချင်စိတ်ကို အတင်းမျိုချပြီး ကျောပေးရင်း မျက်နှာကို ကွယ်ထားရသည်။ ဆက်နားထောင်တော့... ) ဦးဦးဆိုးဆိုးက ဆိုးလွန်းလို့ ရဲက ဖမ်းမမိဘူး။ ကဲ.. ဒီလောက်ဆော့ရရင် တော်တော့ ... အိပ်ရာထဲ ၀င်အိပ်တော့... အသံတိတ်နေရင် ကလေးမရှိဘူး ထင်ပြီး ဦးဦးဆိုးဆိုးက မဖမ်းဘဲ ထွက်သွားလိမ့်မယ်။ ဟော အသံကြားတယ် ဘွားဘွား သွားကြည့်လိုက်ဦးမယ်... ((( ဟေးးး ကလေးဆိုးဆိုးတွေ ရှိကြလား))) (ဘွားအေ ရေချိုးခန်းထဲဝင်ပြီး မတ်ခွက်ကို ပါးစပ်မှာ အုပ်ပြီး လုပ်သံနဲ့ အော်သံ) မရှိပါဘူး မရှိပါဘူး ဒီအိမ်က ကလေးတွေက လိမ်မာတယ်။ (ဘွားအေက ရေချိုးခန်းထဲက အမြန်ထွက်ပြီး မတ်ခွက်မအုပ်ဘဲ အော်သံ) ကလေးတွေ ခဏငြိမ်ကျသွားသည်။ ခေါင်းအုံးပေါ် မျက်နှာအပ်ရင်း ငြိမ်နေပြီမို့ ဘွားအေက အိပ်ရာနား ပြန်ရောက်လာသည်။ ထိုအခိုက် လေးနှစ်သမီး အကြီးမက ဖျတ်ခနဲ ထပြေးပြီး ရေချိုးခန်းထဲ ၀င်သည်။ ခဏနေတော့ အသံထွက်လာသည်။ (((ဘွားဘွား ဆိုးဆိုးတွေ ရှိကြလား))) မအောင့်နိုင်တော့သော ကျွန်မ .... တံတွေးတွေ သီးပြီး ချောင်းတဟွတ်ဟွတ်ဆိုးအောင် ရီမိပါတော့သည်။ ++++++++++++++++++++++++++++++++++ ကဲ... ကျွန်မတို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းက ကလေးတွေအတွက် တိုးတက်မယ့် အတွေးအမြင်တွေ၊ ရိုးသားဖြောင့်မတ်စေမယ့် အမြင်အကြားတွေနဲ့ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်နိုင်မယ့် အလေ့အကျင့်တွေကို ပေးနေသလား ဒါမှမဟုတ်...
Posted by ခွန်မြလှိုင် at 9:11 PM
The best sports casinosites.one bet types and bonuses available in 바카라사이트 Illinois. The 토토 사이트 모음 most common 바카라 사이트 sports betting options available. Bet $20, Win $150, Win $100 goyangfc.com or